Qaraxyo ay ku dhinteen dad badan oo ka dhacay dalka Ciraaq – STAR FM SOMALIA
Qaraxyo ay ku dhinteen dad badan oo ka dhacay dalka Ciraaq
Qaraxyo siyaabo kala duwan uga dhacay Magaalooyin ka mid ah dalka Ciraaq, ayaa waxaa ku geeriyooday dad gaaraya 60-ruux oo dhamaantood u badnaa dad shacab ah oo goobaha qaraxyada ay ka dhaceen ku sugnaa.
Gobolka lagu magacaabo Diyala ee dhanka Bari dalka Ciraaq ku yaallo, wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan qarax ka dhacay wado dadka ay ku badan yihiin oo mashquul kali ah inay ku dhinteen dad gaaraya 40-ruux, halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan oo shacab ah.
Dhaawacyada ayaa la geeyay Isbitaalada caafimaadka, oo lagu dabiibayaa, waxaana wararka ay sheegayaan dhaawacyada qaarkood inay yihiin kuwa aad u liita.
Weerar kale oo qarax ah ayaa isagana wuxuu ka dhacay magaalo ku dhaw Magaalada lagu magacaabo Basra, halkaasi dad ayaa ku geeriyooday, Magaaladan inta badan looga baran rabshadaha ka socda dalka Ciraaq.
Wado ku dhaw halka lagu magacaabo All-Zubair ayaa qarax ka dhacay ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya 10-ruux sida uu xaqiijiyay Sarkaal goobta qaraxa ka dhacay ku sugnaa.
Qaraxyadan masuuliyadooda waxaa sheegtay Kooxda Islaamiga ee Daacish, oo ku faanay inay ka dambeeyeen masuuliyada qaraxyadan.
Magaalada Baqdaadna, Boolisku waxay sheegayaan in gaari waxyaabaha qarxa waday uu 13 qof ku dilay xaafadda Xuseeyniya.
Nin u dhashay dalka yemen ayaa isku gubay afaafka hore ee Xarunta Hay’adda UNHCR